Pataloha → Akanjo fiasana • amboradara solosaina P&M matihanina
Dungarees izy ireo dia iray amin'ireo singa amin'ny fitafiana miasa malaza amin'ny mekanika, ozinina famokarana na ho an'ny mpiasan'ny orinasa mpanao trano. Matetika izy ireo dia vita amin'ny fitafiana ara-pahasalamana sy fiarovana miaraka volon'ondriko ary antsasanyRaha ny marina dia tsy amin'ny sehatry ny asa ofisialy ihany no ampiasana azy ireo fa koa ho an'ny tanjona manokana.
Ny pataloha atolotray amin'ny tolotra omenay dia vita amin'ny lamba avo lenta miaraka amina fiteny tsara indrindra. Noho ireo fiasa ireo dia mahatohitra ny fanasana amin'ny mari-pana ambony izy ireo, ary mitazona ny fananany rehefa mandeha ny fotoana. Ny pataloha dia misy fitaovana ilaina amin'ny fanitsiana azy: bokotra sy fehikibo misy fehikibo vita amin'ny elastika, amin'izay mamela azy ireo hifanaraka amin'ireo olona manana endrika hafa amin'ny vatana. Ho fanampin'izany, manana seho mihantona mahitsy izy ireo.
Dungarees - safidy betsaka ho an'ny fampiononana ny asa
Ny assortment dia misy pataloha ho an'ny asa amin'ny maripana ambany amin'ny ririnina (efitrano tsy misy hafanana, asa any ivelany). Manolotra akanjo misy singa hita taratra ihany koa izahay mba hiantohana ny filaminana mandritra ny asa aorian'ny maizina na eny amin'ny habakabaka.
Dungarees manana paosy ahazoana aina izy ireo, ny maodely sasany koa dia misy paosy fanampiny eo amin'ny lohalika, izay mamela ny fampidiran-tsofina hampitombo ny fampiononana mandritra ny asa mila mandohalika maharitra amin'ny lohalika.
Anisan'ireo pataloha asa no ahitanao karazana maro arakaraka ny fepetra fiasa sy ny filan'ny tsirairay: ny halavan'ny andilana, ny dungarees, ny pataloha manokana ary ny pataloha fampitandremana.
Amin'ny karazany isan-karazany pm.com.pl misy pataloha namboarina tamin'ny mpiasa indostrialy fananganana, fitters ary zaridaina ao an-tsaina. Ny fampiasan'izy ireo, na izany aza, dia mety ihany koa amin'ny asa manokana toy ny zaridaina, ho akanjo miaro akanjo isan'andro amin'ny loto, ohatra, mandritra ny fanamboarana trano, ary miaro amin'ny hafanana ambany.
Omeo toetra manokana ny orinasanao
Betsaka ny orinasa mankasitraka azy maha-olona sy manokana, indrindra raha manana andraikitra amin'ny fifandraisana amin'ireo mpifanaraka sy mpanjifa mety ho mpiasa ny mpiasa. Ao an-tsain'izy ireo no anolorantsika ny safidy hanafarana azy ireo amin'ny pataloha ho an'ny personalization maharitra sy kanto amboradain'ny solosaina. Ny peta-kofehy dia iray amin'ireo fomba maharitra indrindra amin'ny fanamarihana, izay tonga lafatra amin'ny akanjo mila fanasana matetika.
Pataloha asa Allegropataloha asa castoramapataloha fiasan'ny vehivavyny fomba fanasana pataloa asainona no pataloha asa tsarapataloha miasapataloha asa inona no hividyinona no pataloha miasa mandritra ny fahavaratrapataloha asa inona no amporisihinaopataloha asa julamiasa pataloha fohypataloha miasasamy miasa patalohapataloha miasa olxdungarees miasadungareespataloha asapataloha asa betapataloa entanapataloha asa castoramapataloha asapataloha asa mahazatrapataloha fiasan'ny vehivavypataloha miasa dewaltpataloha asa lava-andilanapataloha miasa any Engelbert Strausspataloha miasa aiza no hividiananapataloha miasa raha hiakanjopataloha miasa inonapataloha miasa no atoronaoizay pataloha miasa no tokony hofidinapataloha miasa jeanspataloha asa julapataloha asa fohypataloha miasa leber & hollmanpataloha asa leroy merlinPataloha miasa Lidlpataloha miasa ho an'ny lehilahypataloha asan'ny fitterpataloha miasa camopataloha miasa miaraka amina bracespataloha miasa neopataloha asa mangaPataloha asa alemaninapataloha asa obipataloha asa voaravakapataloha asa misaintsainapataloha miasa dungareesmiasa dungarees landihazo 100castorama dungareespataloha miasa olxpataloha miasa amin'ny tranokalapataloha asa ririnina